Xildhibaan Mahad Salaad “Dhiigga Eng. Yariisow Iyo Saaxiibadiis Ammaano Ayuu Ku Yahay Qof Kasta Oo Mas’uul Dowladeed Ah” |
Xildhibaan Mahad Salaad “Dhiigga Eng. Yariisow Iyo Saaxiibadiis Ammaano Ayuu Ku Yahay Qof Kasta Oo Mas’uul Dowladeed Ah”
Xildhiban Mahad Salaad oo ka mid ah golha Shacabka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga Xukuumadda Fedraalka Soomaaliya isaga oo su’aal geliyay sida ay dadku ugu qanci karaan qoraalkaas.
Qormadiisa ayuu ku bilaabay sidaan
Wasaarada Amniga shalay waxay soo saartay warbixin aan wax nuxur ah lahayn, dhammaystirnayn, kana jawaabayn su’aalo aad muhiim u ah; sida:
Qofka warbixintu sheegtay inuu is qarxiyay, sidee uga mid noqday madaxda gobolka, muddada uu ka shaqaynayay, habka uu shaqada ku soo galay, cidda shaqaalaysiisay iyo habraaca loo maray shaqaalaysiintiisa?
Yaa mas’uul ka ahaa baarista albaabada, maxaa tallaabo ah oo laga qaaday saraakiishii gaboodfalkaas amni sameeyay, immisa qof ayaana loo xiray dhacdadaan naxdinta leh?
Maxaa loo damiyay kaamarada ku xirneed hoolka shirarka ee qaraxu ka dhacay kahor intii uusan qaraxu dhicin?
Saraakiishii yimid goobta qaraxu ka dhacay maxay ula baxeen xog-kaydiyaalkii Kaamarooyinka ku xirnaa xarunta gobolka (Camera Memory), iyadoo ay joogto hay’adii ku shaqada lahayd ee Dambi Baarista (CID)?
Ma dhici kartaa inay jiraan shaqaale ama madax kale oo iyagana ka tirsan argagixisada oo wali ka shaqeeya xarunta gobolka Banaadir diyaarna u ah fulinta falal kuwaan oo kale ah amaba ka sii foolxun?
Haddii xaruntii gobolka Banaadir ee amnigeedu aadka u adkaa sidaan loo beegsaday, ma dhici kartaa in xarumaha kale ee dowladda in iyaguna ay dayacan yihiin sida: Madaxtooyada, Golaha Wasiirada, Goleyaasha Barlamaanka iyo Garoonka diyaaradaha?